Arụmụka: Arch Linux na Debian | Site na Linux
N'oge a anyị ga-eche ihu nnukwu ọgba aghara abụọ nke GNU / Linux ụwa: Arch Linux y Debian. Anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime uru na ọghọm nke ọ bụla distro na anyị ga-eme a mkpirikpi ntụnyere.
Ma gị onwe gị, Kedu nke ka amasị gị?
Arch Linux bu distro nke sitere na distro Crux ọ bụ ezie na ọ nweghị ntọala na ya ugbu a. Okwu distro na-ekwu A mfe fechaa nkesa, nke sụgharịrị pụtara nkesa dị mfe na ọkụ.
Arch Linux na-achọ idobe usoro dị ka obere ibu dị ka o kwere site na isoro ụkpụrụ KISS (Keep It Sihe ima nma, Sohia, nke dị n'asụsụ Spanish mee ka ọ dị nzuzu) na-ezere inwe ngwa etinyegoro ya na akụkụ ndị ọzọ nke anyị na-anaghị eji nweta arụmọrụ dị elu.
Ọ bụ inyefe ntọhapụ, nke a pụtara na ọ na-ahapụ anyị ịtinye usoro ahụ ebe ọ bụ na anaghị ahapụ nsụgharị ya; emelite usoro anyị ga-enwe ọhụụ kachasị ọhụrụ.
Mana ọ bụghị ihe niile bụ ọla edo na-egbu maramara, ntinye nwere ike ịdị mgbagwoju anya si otú a na-atụ ndị ọrụ na-enweghị uche ụjọ na ịgbatị oge ntinye.
Kedu uru nke Arch Linux?
KISS ụkpụrụ: Anyị na-achịkọta usoro ahụ ka anyị chọrọ, wụnye naanị ihe anyị chọrọ.
Releasetọhapụ agwa: Anyị na-ezere ịtinye nkesa dịka nsụgharị ọhụrụ adịghị oyi.
Onye njikwa ngwugwu Pacman: Onye nchịkọta ngwugwu Pacman bụ njikwa ngwa ngwa.
Olọ: Ngwaọrụ a na - enyere anyị aka iji ebe nchekwa AUR, oge ụfọdụ na - ezere ịwụnye faịlụ .tar.gz.
ABS: ABS na-enye anyị ohere ịhazi ma wuo mmemme site na koodu isi ha.
Wiki: Arch Linux Wiki buru oke ibu, mana asugharighi ya n'asusu niile.
Gịnị bụ ọghọm nke Arch Linux?
Nwụnye: Ntinye nwere ike imenye ndị mmadụ ụjọ Linux.
Releasetọhapụ agwa: Bụ nnwere onwe na-agbanwe nwere ike ibute nsogbu na ụfọdụ nchịkọta, ọ bụ ezie na Arch Linux bụ otu n'ime ọgba aghara siri ike.
Elu: Wụnye n'akụkụ dị ka ndị na-ebi akwụkwọ nwere ike ịdị na-agwụ ike n'ọnọdụ ụfọdụ.
Debian bụ ihe amaara nke ọma maka nkwụsi ike ya, ọ naghị eji ntọala ọ bụla ma na - ejikwa .deb packages. Ọ bụ distro nke na-eji 100% free packages serial, si otú a na-ezere iji ngwa dịka Firefox, nke anaghị 100% n'efu. Ọ nwere alaka 3: Stable, Stable (Sid) na Testing.
Dịka m na-ekwu Debian na-achọ nkwụsi ike, nke kpatara ya ka nsụgharị ya na-ewepụta oge ịhapụ ma anyị enweghị nke kachasị ọhụrụ.
N'adịghị ka ihe ọtụtụ mmadụ chere, Debian bụ ezigbo enyi na enyi, dịka Fedora n'echiche a, mana na-enweghị ụdị Mageia (dịka ọmụmaatụ) ozugbo arụnyere ya.
Debian na-agba ịnyịnya ígwè, nke a pụtara na nsụgharị na-ajụ oyi.
Na-enweghị KISS, Debian bụ usoro dị ntakịrị karịa, sịnụ, Linux Mint.
Kedu uru nke Debian?
Obi ike: Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe magburu onwe ya na ebe anyị chọrọ ọnọdụ nchekwa dị elu.
Ngwugwu .deb: Ọ na-enye anyị ohere ịwụnye ngwa na pịa abụọ.
Synaptic: -Enye anyị ohere iji wụnye ngwa na-enweghị iji ọnụ.
Enyi na Enyi: Echichi ahụ anaghị atụ onye ọ bụla ụjọ, ọ bụ ụdị nrụnye na-esote-esote.
Eboro obere: Nke a sụgharịrị ịbụ arụmọrụ ka mma ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ distros.
Kedu ihe ọghọm nke Debian?
100% Onwere: Ndị na-adịchaghị purists ga-ahụ ụfọdụ mmezi nsogbu mgbe wụnye ụfọdụ ngwa ebe ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ dị ka ọkọlọtọ. ndị na-abụghị free y aka.
Hapụ igwe kwụ otu ebe: Ọ na-amanye anyị ka anyị melite na mberede ma ọ bụ tinyegharịa sistemu ahụ na ntọhapụ ọ bụla.
Mmelite: Anyị enweghị nke kachasị ọhụrụ.
Kedu nke ka mma? Ala mi echiche nke ihe ndia:
Ezinaụlọ: Njikọ Linux.
Companieslọ ọrụ: Otu n'ime ha abụọ nwere ike ịba uru ma ọ dabere na data a ga-echekwa yana ebe ụlọ ọrụ kọmputa ahụ ga-adị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Mkparịta ụka: Arch Linux na Debian
% [#########] 100% njiko!
Yaourt? You na-eji yaourt eme ihe n'ezie? Ọ dị nzuzu. Enwere ọtụtụ puku ngwọta ka mma, dị ka 'packer'.
Eziokwu m na-ahọrọ Arch, dịka ị na-ekwu otu o siri sie ike n'ihi na ọ bụ ọnọdụ ederede mana ọ bụrụgodi na ị na-ewere nsogbu ịgụ, n'oge na-adịghị anya, ị ga-enwe mgbagwoju anya na ịgba ọsọ, yana mkpuru okwu ahụ bụ Aur nke ị nwere ike iwunye ihe ngwugwu ọ bụla bụ n'efu ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ihe dị ịtụnanya na njiko.
Mana enwere m ajụjụ gbasara ndị sava ga-aka mma, debian ma ọ bụ centos?
na ihe mere njiko adịghị mma na sava?
Zaghachi Roger Olavarrueth
Nkesa nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, ọ nweghị onye zuru oke.
Ka anyị kọwaa onye ọrụ njedebe site na ederede ederede sitere na enyi m Jesús Lara:
Ọgwụgwụ onye ọrụ bụ onye na-eji kọmputa dị ka ngwá ọrụ, na-enyere ya aka na ya «ọrụ na-enye ya ohere sọfụ Internetntanetị, jikọọ mmadụ netwọk na, gịnị mere, igwu ugbo.
Onye ikpeazu jiri komputa dika onye n’eji ekwenti, microwave ma obu ugboala, 80% n’ime ndi na akwọ ugboala amaghi ihe ndi n’eme ka ha nwee ike ... ịmara ọ dịkarịa ala ihe ndị bụ isi ", mana anyị niile maara na ọ bụghị ...
Ọfọn, n'ezie, ị ga-tọrọ atọ na-eche ụgbọala na-adọkpụ ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ndị bụ isi, mana ka anyị ghọta na nke a agaghị abụ oge kachasị ...
Kama nke ahụ, anyị bi na nke a (opekata mpe m) ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na anyị kwesịrị ịmara ọtụtụ ihe karịa ndị ọrụ ndị ọzọ. "
Ugbu a ... Abụ m onye Debian na anyị aghaghi ịghọta ihe kpatara ihe ji bụrụ, Debian kwụsiri ike, megidere ihe ọtụtụ kwenyere bụ nkesa maka onye ọrụ njedebe ebe mmelite oge dị ole na ole ma ghara imetụta OS dị ka ọ na-eme na ọtụtụ Rolling Releases (RR) . nke ngwugwu ndị dị na anụ) maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 100.
Ihe ochie na Debian? Ee, ma ọ bụghị ihe niile. Na backports ị nwere LibreOffice 3.4.3 na Kernel 2.6.39 (ha ga - enwe 3.1) na Iceweasel 7.0.1 ngwugwu ndị ahụ ịkpọ aha ole na ole na Flash Multimedia na ụdị ha kachasị ọhụrụ.
A naghịzi ewere onye ọrụ ọ bụla nke chọrọ ihe karịrị otu OS (arụmọrụ, ọdịdị, wdg) dị ka onye ọrụ njedebe n'ihi na ọ maara ma mara otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ iji "chebe onwe ya".
Ntughari maka ulo oru? Cheedị banyere kọmputa 200 na-emelite 600 ma ọ bụ ruo 1GB n'otu oge.
RR distros dị mma maka ndị ọrụ dị elu ndị maara ma ghọta mmelite ndị maara na usoro ahụ nwere ike ịdaba na mmelite.
M na-eji Debian Sid agaghịkwa "enwe ọhụụ" mana iji nyere aka na mmepe nkesa.
Maka ndị chọrọ ọhụụ, ha nwere ike iji Linux Mint. Debian Dabere siri ike ma na-eji atụmatụ ọhụrụ arụ ọrụ.
Banyere Arch, echere m na ọ magburu onwe ya na ntinye ya adịghị mgbagwoju anya na pacman ihe niile dị mfe, akwụkwọ ya dị oke mma (ọ ga-abụrịrị n'ihi ọnọdụ pere mpe) yana ọ bụ ezigbo ọkụ. Ọ bụ nnukwu ụlọ akwụkwọ ochie.
Azịza a bụ nke kachasị agbanwe agbanwe ma doo anya, na ụlọ ọrụ na-eji RR distro bụ mmejọ na-egbu egbu, ebe ọ bụ na nkwụsi ike na nhazi bụ ihe kacha mkpa.
dị ka onye ọrụ njedebe, enwere driatriva, ọ chọrọ ihe ikpeazụ, mana ọ maghị ihe ọ bụla gbasara sistemụ ahụ, ya mere, ebe ọrụ ndị a gbagwojuru anya ma jikọtara ọnụ, ebe winbuntu na-apụta karịa debian, mana a na m enyo ya enyo. .
DebianSick lụọ m 😮
Ana m eji debian eme ụlọ ...
ma anaghị m eme mkpesa, n'ihi na enwere m 110% n'efu 😀
Zaghachi Alejandro Saldaña Magaña
Kemgbe mgbe na Debian ka akwadoghị ka imelite ya? Ọ bụrụ na ị chọpụtaghị na ọ bụ distro mbụ nke na-eme ya n'ụzọ siri ike, nke a ma a bịa na mbipute anụ ahụ, mgbe ụfọdụ ndị ọrụ nwere nsogbu ọ bụ ịmepụta sistemụ agwakọta ma ọ bụghị otu achịcha.
Zaghachi na DMBoyCloud
Gaa Debian Sid, ị ga-amarakwa ihe nkwụghachi na-aga.
Rolling na KISS niile dị m mma.
Ọ bụ ezie na mmiri zoro kemgbe okwu a ...
Mee ka o doo anya na Debian, ịbụ Regbahapụ ma ọ bụ ịgbagharị na-enwe ike ịhazi.
Ọ bụrụ na repositories tụọ otu mbipute (na ndabara), dị ka whezzy ma ọ bụ jessie ọ ga-agba ịnyịnya ígwè.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị ahapụ ha ka ha na-atụ aka na ngalaba, nkwụsi ike ma ọ bụ ule dịka ọmụmaatụ, anyị ga-anọ na mwepụta ahapụ.
A na-akwado nkwụsi ike maka sava na ule desktọọpụ.